Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Indlala Yehlabathi Ingxaki Enkulu Yithi Uninzi lwabantu baseMelika
“Uninzi lwabantu baseMelika luyabona ukuba indlala yingxaki enkulu, kwaye nengxaki yemozulu yingxaki yendlala. Ngoku, iinkokheli zethu mazisukume zisombulule ingxaki yethu, ”utshilo uGqirha Charles Owubah, u-CEO, i-Action Against Hunger.
Ukuphawula uSuku lokuTya lweHlabathi ngo-Okthobha i-16, i-Action Against Hunger, inkokheli engenzi nzuzo kumbutho wehlabathi wokuphelisa indlala, namhlanje ikhuphe iziphumo zovavanyo lwabantu abadala base-US abangaphezulu kwama-2,000 86 abenziwe egameni labo yi-Harris Poll ebonisa ukuba i-73% yabantu baseMelika bakholelwa ukuba indlala yehlabathi ihlala iyingxaki enkulu. I-56% eyongezelelweyo yabantu baseMelika bathi utshintsho lwemozulu luya kwandisa indlala phakathi kwezona ndawo zihlwempuzekileyo emhlabeni, kwaye ngaphezulu kwesiqingatha (XNUMX%) sabaphenduli bathi amazwe atyebileyo, njenge-US, kufuneka ancede amazwe anengeniso ephantsi ahlawule iindleko zokuziqhelanisa nemozulu. tshintsha.
“Ehlabathini lonke, ngabantu abazizigidi ezingama-811 abalala bengatyanga busuku ngabunye - kwiindawo ezininzi ehlabathini indlala inokubulala. Kufuneka senze yonke imihla uSuku lokuTya lweHlabathi de sifezekise injongo yethu yokuphelisa indlala kubo bonke abantu, kulunge, ”wongeze watsho uGqirha Owubah.
Iziphumo zophando ezongezelelweyo zibandakanya:
Phantse isiqingatha sabo bonke abantu baseMelika banexhala lokonyuka kwamaxabiso okutya ngenxa yokutshintsha kwemozulu. Ukongeza, ama-46% abantu baseMelika bathi phakathi kwezona nkxalabo zemozulu enkulu kwisizukulwana esilandelayo “kukuphila kwihlabathi elinokutya okuncinci (oko kukuthi, ukunqongophala kokutya ngenxa yemozulu).”
• AmaBoomers kunokwenzeka ukuba athi indlala yehlabathi ihlala iyingxaki enkulu. Ukuqaqanjiswa kwendlala kwihlabathi liphela njengomba obalulekileyo kubaluleke kakhulu kubalo boomers (abaneminyaka engama-57-75) abanokwenzeka ngakumbi kunoGen Z (abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-24) kunye noGen X (abaneminyaka engama-41-56) ukuba bakholelwe ukuba indlala yehlabathi isengumba obalulekileyo. emhlabeni namhlanje (89% vs. 81% kwaye 83%).
• I-75% yabantu baseMelika bacinga ukuba utshintsho lwemozulu lubeka isoyikiso kwikamva loluntu, kwaye iipesenti ezingama-74 zikholelwa ekubeni sonke-kubandakanya amaqela afana norhulumente, engenzi nzuzo, kunye neshishini- kufuneka senze ngaphezulu ukujongana notshintsho lwemozulu. Isifundo esifanayo esivela kwi-Action Against Hunger UK sifumene inkxalabo efanayo phakathi koluntu apho.
• I-60% yamadoda, i-68% yeGen Z, kunye ne-76% yabantu abaMnyama baseMelika bakholelwa ukuba amazwe atyebileyo, njenge-US, kufuneka ancede amazwe anengeniso ephantsi ahlawule iindleko zokuziqhelanisa notshintsho lwemozulu. Phakathi kwamadoda, ama-60% ayavumelana nale ndlela, xa kuthelekiswa ne-53% yabasetyhini. Ama-76% abantu baseMelika abamnyama abangabemi baseSpain bavumelana nale mvakalelo, xa kuthelekiswa neepesenti ezingama-50 zabantu baseMelika baseMelika abangabemi baseSpain kunye nama-61% amaMelika aseMelika. Iipesenti ezingama-68 zeGen Z kunye nama-65% eeMillennials ziyavuma, njenge-52% yeGen X kunye ne-47% yeBoomers.
Iziphumo zokulwa ukulamba ziza emva kwe-2021 Global Hunger Index, eyafumanisa ukuba indlala ihlala "inzima, iyothusa, okanye yothusa kakhulu phantse kumazwe angama-50" kunye nengxelo yeZizwe eziManyeneyo yokuba umntu om-1 kwabangama-33 kwihlabathi lonke ufuna uncedo.
“Ukwazisa ukuba linyathelo lokuqala elibalulekileyo. Ngoku, umhlaba ufuna iindlela ezisebenzayo nezinoxanduva lokujongana nendlala kunye nokutshintsha kwemozulu njengezisongelo ezandayo kwezempilo yoluntu, utshilo uGqirha Owubah. “Ukusilela ukulungisa indlala kungazinzisa imeko kumazwe asele eethe-ethe, kuba indlala ingunobangela nesiphumo sempixano. Xa sityala imali ekulweni indlala nokusindisa ubomi, sityala imali kwikamva: uphando lubonakalisile ukuba yonke i-1 yedola echithwe ukulwa ukungondleki ibuyisela imali eyi- $ 16 eluntwini. ”
Olu phando lwenziwe kwi-Intanethi ngaphakathi e-United States yi-Harris Poll egameni le-Action Against Hunger phakathi kuka-Okthobha12-14, 2021 phakathi kwabantu abadala base-US abayi-2,019 abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu. Olu phando lwe-Intanethi alusekelwanga kwisampulu enokwenzeka kwaye ke ngoko akukho luqikelelo lweempazamo zesampulu yethiyori enokubalwa. Ukufumana indlela yovavanyo olupheleleyo, kubandakanya ukuxabiseka kwezinto kunye neesampulu zeesampulu, nceda unxibelelane noShayna Samuels, 718-541-4785 okanye [imeyile ikhuselwe]
Isenzo sokulwa nendlala yinto engenzi nzuzo ekhokelela kumbutho wehlabathi wokuphelisa indlala ebomini bethu. Ivuselela izisombululo, ikhuthaza utshintsho, kwaye ifikelela kubantu abazizigidi ezingama-25 rhoqo ngonyaka ngeenkqubo zokuthintela indlala kunye neenkqubo zonyango. Njengenzuzo engenzi nzuzo esebenza kumazwe angama-50, abasebenzi bayo abazinikeleyo abangama-8,300 basebenzisana noluntu ukujongana nezona zinto zibangela indlala, kubandakanya utshintsho lwemozulu, ungquzulwano, ukungalingani, kunye noxinzelelo. Izabalazela ukudala umhlaba ongenakulamba, kuwo wonke umntu, ngokulungileyo.